अक्षय कुमारको ४५ लाख सहयोग, ७ सय परिवारको भोजन देवगनको जिम्माकुन कलाकारको के सहयोग ? को विवादमा परे ? – Sanchar Patrika
अक्षय कुमारको ४५ लाख सहयोग, ७ सय परिवारको भोजन देवगनको जिम्माकुन कलाकारको के सहयोग ? को विवादमा परे ?
May 30, 2020 489
कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसंगै यस समय हरेक मानिस तनावमय जीवन बाँचिरहेको छ ।
लाखौंमानिस कोरोना संक्रमित हुँदा अधिकांश मानिस आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन् । अझ दैनिक काम गरेर खाने वर्ग यस समय कोरोना संक्रमणका कारण भोकमरीसंग जुध्न बाध्य छन् । यहीबीच बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले सिने र टेलिभिजन कलाकार संघलाई ४५ लाख भारु आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
यसैबीच पश्चिम बंगालमा आएको चक्रवत तुफानका कारण हजारौ मानिस बेघर भएका छन् । यस मुस्किल घडीमा पश्चिम बंगालका ब्रान्ड एम्बास्डर एवम् चर्चित बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले समेत लाखौं रकम सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।
तर भारतमा बढेको महामारीकाबीच एक निजी कम्पनीको उत्पादनलाई विज्ञापन गरेको आरोपमा दिग्गज बलिउड अभिनेत्री एवम् भारतीय जनता पार्टीकी सांसद हेमा मालिनीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कडा आलोचना गरेका छन् ।
भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बई कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढि प्रभावित क्षेत्र हो । जसका कारण यस क्षेत्रमा रहेका अधिकाशं गरिब दैनिक रोजिरोटीको विकल्पमा भोकभोकै रहन बाध्य छन् । यहीबीच बलिउड अभिनेता अजय देवगनले करिब ७ सय परिवारको खानाको जिम्मेवारी उठाउदै आएका छन् ।
Prevकर्णालीमा थप १४ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या ६० पुग्यो
Nextवैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए चमेरोबाट सर्ने ६ नयाँ भाइरस